ဖေါ်ပြချက်:tripod turnstile, tripod turnstile ယန္တရား, သံလိုက် autocontrol tripod turnstile, ခတ်အတားအဆီးတံခါးဝ, ခတ်အတားအဆီး turnstil, ခတ်အတားအဆီးထိန်းချုပ်မှု
Home > ထုတ်ကုန်များ > လူကူး Turnstile
လူကူး Turnstile ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, tripod turnstile, tripod turnstile ယန္တရား ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, သံလိုက် autocontrol tripod turnstile R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
သံလိုက် autocontrol tripod turnstile  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ခတ် Turnstile (ပုံစံ # STD006) မိတ်ဆက် Flap turnstile တွင်စံသတ်မှတ်ထားသောလျှပ်စစ် interface ကိုတပ်ဆင်ထားပြီး ID ကတ်များ၊ အိုင်ဒီကတ်များ၊ သံလိုက်ကဒ်များ၊ ဘားကုဒ်များစသည်တို့နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ parameter များ: ၁ ။ ပါဝါထောက်ပံ့ရေး: AC220V ± 10V,...
ဒေါင်လိုက် tripod Turnstile (ပုံစံ # STB201 ) parameter များ: ၁ ။ ပါဝါထောက်ပံ့ရေး: AC220V ± 10V, 50Hz / AC110V ± 10V, 60Hz ၂ ။ ပါဝါစားသုံးမှု: 100W ၃ ။ အပူချိန်: -15 မှ 60 ဒီဂရီ ၄ ။ စိုထိုင်းဆ: <95%, ကွန်ကရစ်မပါဘဲ ၅ ။ ကျမ်းပိုဒ်အကျယ်: 600mm...
သံလိုက် autocontrol tripod turnstile
tripod Turnstile (မော်ဒယ် # STB005) parameters: 1. ပါဝါထောက်ပံ့ရေး: AC220V ± 10V, 50Hz / AC110V 10V ±, 60Hz 2. ပါဝါစားသုံးမှု: 100W 3. အပူချိန်: -15 မှ 60 ဒီဂရီ 4. စို: <95%, ကွန်ကရစ်မပါဘဲ 5. Passage အကျယ်: 600mm 6. Pass မြန်နှုန်း: 30...
တရုတ်နိုင်ငံ လူကူး Turnstile ပေးသွင်း
Mama လုံခြုံရေးကဒီဇိုင်းလူကူး Turnstile အနုပညာနှင့်ခေတ်သစ်ဒြပ်စင်များ၏ပေါင်းစပ်လိုက်, ထိုသို့ကြော့တည်နေရာအတွက်အလွန်စံပြဖြစ်ပါတယ်။
Mama လုံခြုံရေးအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးလူကူး Turnstile လမ်းသွားလမ်းလာများအတွက်အရာရရှိနိုင်သောအကျယ်ဆုံးကျမ်းပိုဒ်, အိတ်သို့မဟုတ်အထုပ်များနှင့်စက်ဘီးနှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုရှိပါတယ်။
စက်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောလုံခြုံရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပစ္စည်းတွေချမှတ်နေဖြင့်လုံခြုံရေးနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောအဆင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးနှိုးဆော်သံ devices များ, etc ဦးတည်ချက်အညွှန်းကိန်း
tripod turnstile tripod turnstile ယန္တရား သံလိုက် autocontrol tripod turnstile ခတ်အတားအဆီးတံခါးဝ ခတ်အတားအဆီး turnstil ခတ်အတားအဆီးထိန်းချုပ်မှု RFID tripod Turnstile